हाम्रो बारेमा - Zhejiang Gaozhong प्लास्टिक मशीनरी कं, लिमिटेड
Zhejiang Gaozhong प्लास्टिक मशीनरी कं, लि।
झेजियांग Gaozhong प्लास्टिक मशीनरी कं, लिमिटेड चीन होज टाउन -Panan काउन्टी ， Zhejiang प्रांत मा स्थित छ, १ 199 199 १ मा स्थापित भएको थियो, कम्पनीले मुख्य रूपमा उत्पादन गर्दछ: प्लास्टिक नालीदार पाइप उत्पादन लाइन, प्लास्टिक घुमाउने पाइप उत्पादन लाइन, पीपी / PE / PVC पाइप उत्पादन लाइन, प्लास्टिक extruder, कर्षण मेशिन, घुमाउने मशीन, प्लास्टिक पाइप मोल्ड र प्लास्टिक मशीनरी को अन्य प्रकारको। हामीसँग हाम्रो वर्कहाउसको स्वामित्व छ, त्यसैले हामी ग्राहकहरूको अनुरोध अनुसार सबै प्रकारको प्लास्टिक पाइपहरू पनि बनाउन सक्छौं।
कम्पनीसँग उत्कृष्ट प्राविधिक प्रतिभाहरूको समूह छ, र ठूलो संख्यामा उन्नत सीएनसी उत्पादन उपकरणहरू छन्। हामीले हरेक वर्ष उपकरणको मात्रा बढाएका छौं। अब कम्पनीमा already०-40० जना कर्मचारी छन्, हरेक कर्मचारी कम्पनीमा तीन बर्ष भन्दा बढि समय देखि रहेको छ। ती सबैको टेक्नोलोजी छ, त्यसैले हामी ग्राहकहरुलाई कम मूल्यको उच्च गुणवत्ताको मेशिन आपूर्ति गर्न सक्छौं।
२ Y बर्ष अनुभव
E० भन्दा बढि रोजगार
निर्यात सम्झौताहरू १०
१. उपकरणहरूको बारेमा, GZSJ ले १२ महिनाको राम्रो गुणको प्रतिज्ञा गर्‍यो।
२. वारेन्टीको बखत कुनै जानीजानी र कृत्रिम तवरले क्षतिग्रस्त हिस्सा परिवर्तन हुँदैन, हामी स्वतन्त्र रूपमा मर्मत र प्राविधिक सेवाहरू दिनेछौं।
12. १२ महिना भन्दा बढीमा, क्रेताले लगाएको भागको उत्पादन लागत तिर्नु पर्छ, र जीवनभर उपकरण र स्वतन्त्र उपकरणको अंश आपूर्ति गर्दछ।
हामीसँग अनुकूलन गरिएको उपयुक्त प्लास्टिक मेशिनको लागि १ 15 बर्ष भन्दा बढीको डिजाइन र विकासको अनुभव छ। झेजियांग Gaozhong प्लास्टिक मशीनरी कं, लिमिटेड एक जुलूस कम्पनी हो जो प्लास्टिक मेशीनको डिजाईन र निर्माणमा माहिर छ। हाम्रो कम्पनी दुबै घर र विदेशमा उच्च गुणवत्ताका उत्पादनहरू र पूर्ण सेवा प्रणालीहरूको लागि परिचित छ।
मुख्य बजार : भियतनाम, भारत, इजिप्ट, जोर्डन, अफगानिस्तान, मध्य पूर्व, आदि
हामीले हरेक वर्ष उपकरणको मात्रा बढाएका छौं। हामी २० बर्षसम्म प्लास्टिक नालीदार पाइप उत्पादन उपकरणको सुधार र विकासमा केन्द्रित छौं। अग्रणी घरेलु उत्पादन टेक्नोलोजीको साथ कम्पनीको छिटो विकास भएको छ। कम्पनीको प्लास्टिक मेशिनरी र उपकरणहरू सबै प्रकारका अटो तार दोलागी नालीदार पाइप, तार र केबल थ्रेडि pipe पाइप, सजावटी बत्ती र लालटेन पाइप, पानी इनलेट र धुलाई मेशिनको लागि आउटलेट पाइप, वातानुकूलित पाइप, मेडिकल ट्यूब, टेलिस्कोपिक पाइपको उत्पादनमा लागू छन्। आदि .... वर्षौं बित्तिकै हामी GREE, Midea, Haier, सानो हंस, र धेरै राम्रा उद्यमहरूलाई उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरू प्रदान गर्दछौं।
कम्पनीले हरेक वर्ष आन्तरिक र विदेशमा विभिन्न प्रदर्शनीहरूमा भाग लिन्छ, हामी पनि नालीदार पाइप उत्पादन लाइन प्रदर्शनीमा देखाउनेछौं र सबै व्यक्तिले यसलाई देख्न सक्दछन्। हामी कसरी मेशिनले काम गर्छौं, सामग्री के सबै विवरण के वर्णन गर्दछौं।
उत्कृष्ट गुण हाम्रो प्रयासहरूको दिशा हो। राम्रो प्रतिष्ठा हो जुन हामी जिद्दी गर्छौं।